Wararka - Su’aalo La Waydiiyo Intaadan Iibsan Bacda Pizza -ga
Su'aalaha La Waydiiyo Kahor Iibsashada Bacda Pizza -ga
Doorashada bacda saxda ah ee pizza ayaa laga yaabaa inay adkaato oo qaado xoogaa tijaabo ah iyo khalad si loo helo bacda kuugu habboon, mararka qaarkoodna kharash aad u sarreeya. Halkan waxaa ah afarta su'aalood ee muhiimka ah ee laga jawaabayo ka hor intaadan gelin boorso gaar ah. Su'aalaha soo socda in la waydiiyo ka hor intaadan iibsan bacda pizza.
1. Ma qaalibaa?
Mararka qaarkood waa, laakiin inta badan, waxaad ku heli kartaa natiijo isku mid ah qiime jajab ah, uma baahnid inaad bixiso lacag aad u badan si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. Sanduuqa gaarsiinta pizza ee caadiga ah wuxuu ujeedkiisu yahay inuu cuntada diirimaad ku hayo, laakiin halkii uu si firfircoon uga bixin lahaa kuleyl, waxaa laga yaabaa inay dahaariso Pizza -da.
2. Waa Maxay Muddada Bixinta?
Gaadhsi kasta, wax ka yar 15 daqiiqo maahan inaad ka walwasho kulaylinta bacda pizza, bacda bixinta Pizza oo si fiican u dahaaran ayaa ku siin doonta tayo iyo heerkul aad u joogto ah, raadi suufka bacda ku jira, oo waydii lakabyada waxay ka kooban tahay.
3. Sideed u bixin doontaa?
Baabuurka aad isticmaasho si aad u keento ayaa saamayn weyn ku leh doorashadaada bacaha. Marka laga hadlayo gaarsiinta baabuurka gacanta si fiican u daboolan ee pizza, bacdu waxay samayn kartaa khiyaanada. Haddii aad ku bixinayso mooto, oo leh dhammaan faa'iidooyinkeeda meelaha taraafigga ee sarreeya, waxaad dooran kartaa xalka boorsada oo aad u fudud oo wax ku ool ah in la isticmaalo. Bacaha pizza ee boorsada sida caadiga ah aad bay u dahaaran yihiin, iyagoo tixgelinaya in loo adeegsan doono hawada furan, iyo biyo -mareenka, iyadoo la hubinayo inaysan biyuhu gaarin sanduuqyada pizza ee gudaha ku jira.
4. Waa maxay xajmiga amarkaagu?
Had iyo jeer waxaa fiican inaad doorato boorso ku habboon amaradaada sida ugu dhow ee suurtogalka ah. Doorashada boorsada weyn ee dalabka yar waxay keentaa kulayl badan oo luma, markaa isku day inaad iibsato laba ama saddex cabbir oo ku xidhan cabbirka dalabkaaga. Haddii aad leedahay dhowr cabbir, waxaa la doorbidayaa inaad u hesho boorsooyin cabbir kasta, amarrada waaweyn waxaad u adeegsan kartaa laba boorso ama hal bac weyn, bacaha waaweyn waxaa laga doorbidayaa nooca dhinac -adag si ay u taageerto miisaanka amar weyn.
Waqtiga dhejinta: Jul-12-2021